NDỊ NTỌ NDỊ FULANI KA NDỊ NWE ALA MARA ỌHỊA NILE NỌ N’ALA-IGBO – FADA A TỌỌRỌ – hoo!haa!!
NDỊ NTỌ NDỊ FULANI KA NDỊ NWE ALA MARA ỌHỊA NILE NỌ N’ALA-IGBO – FADA A TỌỌRỌ
Enugwu – Ụkọchukwu Arinze Madụ bụ onye ndị Fulani tọọrọ na nso a ekwuola na ndị Fulani a ka ndị nwe ala mara ọhịa nile nakwa ụzọ nwa-abọ̀ (bush path) nile dị n’Ala-Igbo.
Fada Madụ, onye nke bụ Osote Onyeisi n’ụlọ ọzụzụ ndị Fada, Queen of Apostles Seminary, Imezi Ọwa dị n’Okpuru Ọchịchị Ezeagụ n’Enugwu Steeti kwuru nke a n’okwu ọ gwara Raph Ede, onye nta akụkọ akwụkwọ akụkọ Punch.
“Ndị a ma oke ọhịa nakwa abọ̀ anyị ọfụma karịa ka anyị bụ ndị nwe ala si mara. Ha ma ihe nile banyere oke ọhịa nile dị na be anyị karịa anyị.
“A tọọrọ m n’ebe elekere anọ nke mgbede n’abalị abụọ nke ọnwa Ọktoba, afọ a. Anyị si ogige ekpere Ugwu Dị Nsọ, Eke, ebe anyị gara ekpere lọta. Ozigbo ahụ, a kwakọrọ m akpa m na ngwo ngwo m ndị ọzọ ịga mmemme ọzọ n’Enugwu.
” Ka m na-erute nso n’ọnụ ụzọ ámá, a hụrụ m nwatakịrị nwoke gbara egbe na-abịa m nso E nwekwara obere ụmụ nwoke abụọ nọ m n’akaekpe na-agbakwa egbe. N’otu ntabi anya, ha gbariri enyo ihu (windscreen) ụgbọala m”.
Ụkọchukwu ahụ kọrọ ka ha si kpokọrọ ma ekwentị ya, ma ìgwè laptop ya, wee duru ya tinye isi n’ọhịa. Ha dukwara gafee Mmiri Ajali ma na-abamikwa n’ime ọhịa nke na ọ maghịzị ebe ha nọ.
“Ha nọ na-azọ mba igbu m. Ihe ha ji emete n’ụra bụ iji osisi kụọ m ihe. N’ime ọhịa ka anyị na-arahụkwa, ma oge mmiri na-ezo.”
Ọ kọwara na ndị tọọrọ ya bụ ndị Fulani, “Mụ na ha nọ abalị abụọ. Ihe m nụrụ ha na-asụ bụ Fulani”
Otu a ka Fada Ofu siri zute ọnwụ ya n’aka ndị a n’ejighi ndụ mmadụ kpọrọ ihe. Ruo taa, o nwebeghi ihe e kwutere banyere ndị kpara mkpa mkpa a.
Kaosiladi, Gọọmenti Enugwu Steeti amalitewo atụmatụ Ndị Nche Ọhịa nke a na – ele anya na o nwere ike ibelata mwakpo ndị ntọ ndị Fulani a, ma ọ bụrụ na etinye ya n’ọrụ etu kwesịrị ekwesị.
Previous Post: RUGA:ỤMAHỊ KPACHARA ANYA-OESID
Next Post: ONYE UWE OJII IBE M DINARA NWA M DỊ AFỌ ITOOLU N’IKE